Account Options Prisijungti. Nauji leidimai. Vulture Wallpaper lucas17 Pramogos. Average vulture or vulture representative subfamilies loggerhead family Accipitridae.
Guddiga Dib-u-habeynta Qabyoqoraalka Dastuurka. Jamhuuriyadda Federaalka. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin islamarkaasina aysan soomaaliys talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax oggolaado.
Awoodaha Maxkamadda Dastuurka 1 Maxkamadda Dastuurku waay yeelaneysaa awoodahan u garrka ah: Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Haddii uu bannaanaado xafiiska Madaxweyne, waxaa qabanaya xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ilaa laga soo dooranayo Madaxweyne cusub muddo aan ka badnayn soddon 30 maalmood gudahood. Awoodaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah 1.
Xeer-hoosaadka Golaha waa inuu qeexo mararka ay lagama dasguurka noqonayso in Golaha Shacabku yeesho fadhiyo ay albaabadu u xiranyihiin. Dhaarta Raisul-Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiirradu markay helaan codka kalsoonida inta aysan xilkooda bilaabin, waxa lagu dhaarinayaa kalfadhi gaar ah ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah, waxaana dhaarinaya Gudoomiyaha Maxkamadda sare, dhaartaasina waa sidatan: Xiriirka Shaqada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay dxstuurka helo xiriir shaqo caadil ah.
KALA-GUUR Sida waafaqsan qodobbada iyo aad, Baarlamaanka fadaraalka Soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa dhaqan-gelinayaana wax-ka-beddel ku aaddan Dastuurka ku meel-gaarka, hab waafaqsan heshiiskii ay ka wada-xaajoodeen Dowlladda Fedderaalka ah iyo Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee jira iyo kuwacusub, oo, balse aanan ku koobnaynqodobbadan soo socda: Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Qodobka aad- Qodobada ku dabaqma wax ka badelka Dastuurka ku meel gaarka ah Jadwalka koowaad Cama sharci lagu xusay jadwalka koowaad D dastuirka Dastuurkan ka hor dastuurkaa aanay dhammaan xilliga koowaad ee Baarlamaanka Federaalka: Haddiise xannaanadaas uu ka waayo deegaanka qoyskiisa waa in loo yeelo cid kale oo daryeesha. Durid Sharci 1 Sharci maray habraaca ansixinta sharciyada iyo dhaqangeliddaba waxaa lagu duri karaa oo keliya inuu ka soo horjeedo Dastuurka.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Xorriyadda Kulanka, Bannaanbaxa, Cabashada iyo Codsi-wadareedka Iscasilaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama uusan waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso.
Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah April 25, Iyadoo la dashuurka Dastuurka, Guddiga Xuquuqda Aadmiga, wuxuu yeelahanayaa awood uu ku fuliyo hawlahan: Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalku wuxuu matalaa Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka, masuuliyadihiisa sharci-dejintaba waxaa ka mid ah: Sidoo kale haddii aan laga helin oggolaansho Golaha Xildhibaanka lama qaban karo, xabsina laguma hayn karo iyadoo la fulinaayo xukun maxkamadeed oo xataa kama dambays ah.
Hindise Sharci oo Qabyo ah oo ka bilowday Aqalka Sare. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Soomaaliya waa Jamhuuriyad federaal ah, leh gobannimo, dimoqraaddi ah, oo ku dhisan matilaadda dadweynaha, loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan iyo caddaalad bulshadeed. Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Golaha Shacabku ee Dastuurrka Federaalku wuxuu matilaa dhammaan shacabka Soomaaliya, Awoodda sharci-dejinta ee Golaha shacabku keligii leeyahay waxaa ka mid ah: Xukuumadda Xil-Gaarsiinta Inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Raisul-Wasaare cusub la dhaarin doono, Raisul-Wasaarihii hore ee xilka hayey iyo Golihiisa Wasiirradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee Dawlada si xilgaarsiin ah.
Xorriyadda iyo Nabadgelinta Qofnimada Doodaha Baarlamaanka Federaalka waxaa ay ahaanayaan kuwo aan qarsoodi ku dhicin oo dadweynaha u furan haddii aaney taasi diideynin xaaladda jirta. Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah 1 Xukuumadda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka waxay shaqaalasanayaan hawl-wadeennadooda.
Qaybaha ku dabaqma wax ka beddelka Dastuurka ee lasoo jeediyay ka hor inta aanay dhammaan muddada koowaad ee wakhtigaBaarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya: Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu dhacayo ama wax laga beddelayo, waajibka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad. Xasaanadda Xildhibaannada Golaha Shacabka 1 Xildhibaanka Golaha Shacabka dhibaato kama soo gaari karto fikradda ama codka uu ka hor dhiibto Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah iyo guddiyadiisa.
Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 1 Gobannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo idil, oo ay ku jiraan berriga, badaha, jasiiradaha iyo uurkooda hoose, hawadooda Sare iyo geyi-qaaradeedka iyo dhul iyo biyo-goboleed kasta oo ku soo biira Jamhuuriyadda Soomaaliya, si waafaqsan sharci uu Baarlamaanka Qaranku ansixiyo.
La tashiga iyo wax isu-oggolaasho dhex mara dhinacyada ay khuseyso; 2. Dhaqanka iyo Afka 1 Dawladdu dzstuurka in ay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee Shacabka Soomaaliyeed, iyadoo ku dedaaleysa in ay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan-soo-baxa ah ee wax u dhimaya midnimada, ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada.
Xigtada ugu dhow carruurta waa in sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogal ah loo war-geliyaa xiritaankooda. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Qaab-dhismeedka Dawladda 1 Qaab-dhismeedka Dawladda ee Jamhuuriyadda Federaalku wuxuu ka kooban yahay 2 heer Dawladeed: Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Haddii uu bannaanaado xafiiska Madaxweyne, waxaa qabanaya xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ilaa laga soo dooranayo Madaxweyne cusub muddo aan ka badnayn soddon 30 maalmood gudahood.
Tirada xubnaha Golaha Shacabka 1 Xubnaha Golaha Shacabka waxaa si toos ah, qarsoodi ah, oo madaxbanaani ku dooranaya shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Habka Hawlqabadka Maxkamadaha Qaranka Xukuumadda Xil-Gaarsiinta Inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Raisul-Wasaare cusub la dhaarin doono, Raisul-Wasaarihii hore ee xilka hayey iyo Golihiisa Wasiirradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee Dawlada si xilgaarsiin ah.
Guddiga waa in ahaataa mid loo dhan yahay, waana inay noqotaa dhexdhexaad waana inayna ka badnaan tiro sagaal xubnood ah. Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah 1 Xuquuqda asaasiga ah soojaaliya xorriyadda lagu aqoonsaday qaybtan waa in la dhowraa marka kasta oo sharci la dejinayo lana fulinayo.
Skip to main content. Xorriyadda xirfadda, Shaqada iyo Mihnadda Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa in ay doortaan labada Soomaalija ee Baarlamaanka oo wada fadhiya, waxaana guddoominaya fadhigaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.
Qodobka aad- Qodobada ku dabaqma wax ka badelka Dastuurka ku meel gaarka ah Jadwalka koowaad Cama sharci lagu xusay jadwalka koowaad D ee Dastuurkan ka hor inta aanay dhammaan xilliga koowaad ee Baarlamaanka Federaalka: Sixidda Ku-xadgudubka Xuquuqda 1 Sharcigu waa in uu qeexaa habraac habboon oo lagu saxayo xadgudubyada xaquuqda Aadanaha. Awoodda Garsoorka Jamhuuriyadda Soomqaliya Guddiyada Wadaagga ee Baarlamaanka Federaalka 1 Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ahi waxa ay dastuuka karaan guddiyo wadaag ah oo hawlahooda u fududeeya.
Your email address will not be published. Gudniinka gabdhaha waa reeban yahay. Doodaha Dastuurak Federaalka waxaa ay ahaanayaan kuwo aan qarsoodi ku dhicin oo dadweynaha u furan haddii aaney taasi diideynin xaaladda jirta. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Daryeelka Qoyska 1 Guurku waa aasaaska qoyska oo ah saldhigga bulshada, ilaalintiisuna waa waajib sharci ah oo saaran Dawladda.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Xildhibaannada mooshinka keenay, waxaa ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen: Sharci-dejin qabyo ah 1 Si waafaqsan Dastuurka, habraaca sharci-dejintu waa hindise sharciyeed qabyo ah oo ku saabsan: Guddiga Qaranka ee Madax Bannaan ee Doorashooyinka: Mowduucyada la xiriira Soomaaliya.
Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Haddii Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama caafimaad-darro ama sabab kasta oo kale darteed uusan awoodin inuu guto xilkiisa, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ayaa xilkiisa sii qabanaya ilaa inta uu Madaxweynuhu xilkiisa dib ugu soo noqonayo.